Kitra – « Amboaran’i Madagasikara » : tsy mbola namaly ny «Codis », hiakatra kianja ny FC Rabaza | NewsMada
Kitra – « Amboaran’i Madagasikara » : tsy mbola namaly ny «Codis », hiakatra kianja ny FC Rabaza
Hatreto, mbola mipetraka ny baraingo amin’ny fanatontosana ny lalao ampahefa-dalana, fiadiana ny Amboaran’i Madagasikara, taranja baolina kitra, hatao any Fianarantsoa. Samy miandry ny ho tohiny ny rehetra.
“Hatramin’ny androany (omaly alakamisy), tsy mbola naharay ny valiny tamin’ny fampakarana ny fitoriana nataonay tany amin’ny komision’ny fitsipi-pifehezana (Codis), eo anivon’ny federasiona, izahay FC Rabaza. Noho izany, hidina any Fianarantsoa ny ekipa rehetra, ary hiakatra kianja hanatanteraka ny lalao ampahefa-dalana, amin’ny fiadiana ny amboara. Efa vonona rahateo ny mpilalao hiatrika an-dry zareo FC Ilakaka amin’ny alahady ho avy izao”, hoy Ramilison Guillaume, filohan’ny ekipa FC Rabaza.
Nanambara kosa ny tomponandraikitra eo anivon’ny federasiona fa mbola eo am-pandinihana io fampakarana io, ankehitriny, ny ekipa teknika rehetra ka hamoaka ny fehinkevitra farany momba izany.
Noresena “par forfait”
Raha tsiahivina, nanome rariny ny Cosfa ny Codis, tamin’ny fitoriana napetrany, mahakasika ireo mpilalao efatra mirahalahy manatevina ny FC Rabaza, izay voalazan’izy ireo fa tsy manana ny taratasy fifindran-toerana ara-dalàna. Vokatr’izay, natao “forfait” ka resy tamin’ny isa 3 no ho 0 ny FC Rabaza, tamin’ny lalao ampahavalon-dalana. Tetsy ankilany, nitondra ny porofo rehetra ny FC Rabaza fa fandikan-dalàna no nataon’ny Cosfa ary tsy nanaraka ny fepetra amin’ny lalàna mifehy ny federasiona.
Taorian’izay, namaly ny sazy navoakan’ny “Codis”, izy ireo ary nandefa taratasy fampakarana ny raharaha, tamin’ny alalan’ny mpisolo vavany saingy izao tsy mbola nahazoan’izy ireo, valiny izao.
Araka ny vaovao voaray, efa lasa nidina any Matsiatra Ambony ny ekipan’ny FC Rabaza, hanatanteraka ny fihaonana amin’ny alahady ho avy izao. Samy mametra-panontaniana avokoa ny rehetra ny amin’izay mety hitranga ao amin’ny kianjan’Ampasambazaha, raha toa ka ekipa telo no indray hiakatra kianja. Efa nanamarika Ramilison Guillaume fa tsy tompon’antoka, amin’ny tranga mety hiseho ny tenany sy ny ekipan’ny FC Rabaza.